Himalaya Dainik » साउथ इन्डियनका चर्चित यी ६ कलाकारः किन टिक्न सकेनन् बलिउडमा ?
साउथ इन्डियनका चर्चित यी ६ कलाकारः किन टिक्न सकेनन् बलिउडमा ?
केही साउथ स्टारले बलिउडमा कदम मात्र राखेनन्, दर्शकको पनि दिल जिते । तर पनि उनीहरुले बलिउडमा दक्षिण भारतीय फिल्मको जस्तो सम्मान पाउन सकेनन् । त्यहीकारण बलिउडमा हिट फिल्म दिएर पनि उनीहरु चल्न सकेनन् ।
दक्षिण भारतीय फिल्मका स्टारहरु मूलधारका बलिउडका स्टारजस्तै भारतभर निकै लोकप्रिय छ । दक्षिण भारतीय स्टार वेंकटेश चिनाइ रहनुपर्ने कलाकार होइनन् । ९० को दशकमा यी अभिनेताले अभिनेत्री करिश्मा कपुरका साथ ‘अनाडी’ जस्तो ब्लकब्लष्टर फिल्ममा अभिनय गरे ।
जुन फिल्मको गीत आज पनि दर्शकको मुखमा झुण्डिएको छ । उनले अन्य केही बलिउड फिल्ममा अभिनय गरे, तर राम्रो पहिचान बनाउन सकेनन् । त्यसपछि उनी पुनः दक्षिण भारतीय फिल्ममा नै फर्किए ।
आज कामदा एकादशीः यो एक कार्य अवश्य गर्नुहोस, आँटेको पुग्नेछ
सरकारी गाडीमा १७ बर्षीया किशोरी लिएर डुकु होटल पुगेका थिए गाउँपालिका प्रमुख